My X report - ysmụ nwoke --hụnanya - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
My X akụkọ nkezi 4.5 / 5 si 26
NA / A, o nwere ihe nlere 107.9K
Comedy, Weebụ, Yaoi
Seorim na-arụ ọrụ na ụlọ nyocha dị ka onye sayensị, mana… ọ tụgharịrị na ọ kachasị mma ịgbaso usoro. Mgbe ọ gbasasịrị ụfọdụ ngwa dị oke ọnụ, onye isi ya nyere ya ohere imezi (gụọ: kwụghachi ya ụgwọ) site na ịrụ ọrụ dịka onye nledo na ụlọ nyocha nke onye asọmpi. O bu nro ka emezuru! Prọfesọ Gong bụ onye a ma ama dị ka onye nwere ọgụgụ isi na onye ọhụụ ma ọ goro Seorim ka ọ rụọ ọrụ na ụlọ nyocha ya. Akụkụ nke ọrụ ya bụ ịnwale ngwaahịa ọhụrụ, mana naanị ihe ọ ga-anwale na ụlọ nyocha Prọfesọ Gong nwere ike bụrụ ihe ijuanya karịa eziokwu ahụ bụ na e goro ya ma ọlị.
Nwere ike ịchọpụta ọtụtụ bara yaoi
Mma Mmanụ a .ụ
Abụ M Otu ìgwè